Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifamonoana teny Analamahitsy: Nodisoan’ny polisy ny fisiana “foroches”
Fifamonoana teny Analamahitsy: Nodisoan’ny polisy ny fisiana “foroches”
Trangam-piarahamonina iray niteraka resabe teny amin’iny faritra Analamahitsy Cité sy ny manodidina iny, ny fifandonana na fifamonoana izay nisy teo amin’ny andiana tanora maromaro, izay niseho ny alakamisy 01 marsa lasa teo. Tao aorian’io gidragidra nitranga teny Analamahitsy Cité io dia nisy ireo olona nanaparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera sosialy fa efa tonga eto Andrenivohitra ny “foroches” ankehitriny ary nanakorontana sy namon’olona teny Analamahitsy. Tsy nijanona tao anaty tambazotran-tserasera ihany ny vaovao fa nisy vitsivitsy tamin’ireo gazety mpiseho isan’andro no namoaka ny vaovao ka nilaza izay fisiana andiana “foroches” eto Andrenivohitra izay. Manoloana ity resaka miparitaka any anaty tambazotran-tserasera sosialy ity indrindra dia namoaka filazàna ho an’ny be sy ny maro ny avy anivon’ny polisim-pirenena, omaly, ary nilaza fa tsy marina velively ny vaovao niparitaka fa efa tongan’ny “foroches” eto Antananarivo . Tsara ihany ny manamarika fa ny foroches dia tsy inona fa andiana tanora lahy maromaro tia setrasetra ary tsy manao afa-tsy ny manakorontana ny fiarahamonina misy azy. Hatramin’izay dia tany Antsiranana no nahitàna ny “foroches”, saingy amin’izao fotoana izao dia efa ahitàna izany koa any amin’ireo tanàn-dehibe sasantsasany any amin’iny tapany avaratry ny Nosy iny, indrindra fa ao amin’ny Faritr’i Diana sy Sava. Raha ny fanazavana nomen’ny eo anivon’ny polisim-pirenena dia fifandonana niseho teo amina andiana tanora tahaka izay mitranga eny anivon’ny fiarahamonina rehetra eny no niseho teny Analamahitsy tamin’io andron’ny alakamisy 01 marsa io fa tsy “foroches” nanakorontana, araka ny vaovao naparitaka. Tovovavy iray niresaka tamin’ny lehilahy vitsivitsy no fototry ny disadisa. Tsy nahafaly an’ireo tovolahy naman’ity vehivavy ity ny nahita azy niresaka tamin’ny lehilahy hafa ka raikitra ny fifampikasihan-tanana. Rehefa tsy nahatohitra ny andaniny noho ny fahavitsian’izy ireo dia vaky nandositra tany Andrononobe sy Ambohitrarahaba. Minitra vitsivitsy tao aorian’izay anefa dia niverina niaraka tamin’ny vatan-dehilahy maro hafa ireto nandositra ireto ka raikitra indray teo ny fifandonana ary betsaka no naratra vokatr’izany.
Lalàm-pifidianana: Dia mba ahoana ny olona marary sy marary saina ?
Iankinan-javatra maro ny mahakasika ny fahasalaman’ny olona iray amin’ny fanatanterahana ny asany. Izany no antony anaovana fitiliana sy fanamarinana fahasalamana raha toa ka hiditra ho mpiasam-panjakana ny mpiasa iray. Hoan’ny asa izay iakinan’ny fiainan’ny orinasa na ny asam-panjakana fa indrindra ny aim-pirenena dia tokony ho olona salama vatana sy salama saina no hiasa amin’izany ary indrindra raha toa ka ho olona hitondra ny firenena izany. Aoka nefa tsy hafangaro ny olona sembana sy ny olona marary fa tsy mitovy tanteraka izy ireny. Raha vao fantatra fa marary saina na narary saina ilay olona iray dia mazana tonga dia omen’ny fanjakana fisotroan-dronona avy hatrany na firy taona na firy taona niasany na (retraite d’office). Tsy tafiditra ao anatin’izany koa ireo izay manana toe-batana toa ny diabeta sy ny mitovitovy amin’izany izay mahazo ny olona rehefa manomboka mahazohazo taona..
Ny matetika tsy azon’ny fanjakana ampiasaina mihitsy ny olona marary saina, na voan’ny raboka ary ny areti-mifindra isan-karazany. Toa izany koa ireo olona izay tsy afaka mihetsika intsony fa matory ao am-pandriana foana. Ireo izay iverimberenan’ny krizy tsy mahatsiaro tena matetika koa dia tsy tokony hiasa amin’ny fanjakana sy hanao asan’olomboafidy intsony.
Raha toa ka mandinika ity lalàm-pifidianana vaovao ity isika dia mahita fa tsy misy andininy miresaka mahakasika ny olona marary saina na voan’izany tany aloha. Midika izany fa mahazo milatsaka hofidina avokoa rehefa olona rehetra ka tsy ao anatin’ity lalàm-pifidianana ity.
Amin’ny lalàmpanorenana misy ankehitriny aza dia voalaza mazava tsara ao ny mahakasika ny fetra-taona farany ambany hahazoana milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena.
Rariny sy hitsiny raha toa ka hojeren’ny depiote sy ny senatera ny mahakasika ny fahasalamana ny olona hilatsaka ho filoham-pirenena izany. Indrindra fa ny fahasalaman’ny sainy.
Tamin’ny andron’ingahy Philibert Tsiraranana dia isan’ny olana lehibe teto amin’ny firenena ny fitsaboana azy tany frantsa ny faraparan’ny mandà faharoany , ka voatery ingahy André Resampa no nitantana ny firenena Malagasy. Niteraka olana be tamin’ny repoblika voalohany iny raharaha iny, satria nitarika ady tao amin’ny mpitondra ka nitarika ny figadran’ingahy Resampa mihitsy izany.
Tany Amerika indraya dia nisy fizaham-pahasalamana natao tampoka tamin’ingahy Donald Trump izay nangatahan’ny parlemanta Amerikanina mahakasika ny fahasalamana ara-tsaina an’ity filoha ity. Izany dia noho ny fahatsapan’ny parlemantera sasantsasany fa manampanahy ny fahasalamana ara-tsainan’ity filoham-pirenena ity. Rehefa vita izany fa tsy manana olana ara-tsaina izy dia nijanona teo ny raharaha. Dia mbola manamafy izany fa zava-dehibe ny mahakasika ny fahasalamana fa indrindra ny fahasalaman’ny saina hoan’ny olona hitondra firenena sy hiasam-panjakana.
Efa miditra amin’ny fanatsarana ny fitantanana ny raharaham-pirenena isika ka rariny sy hitsiny raha toa ka hazava toa izany koa ny mahakasika ity fahasalamana ity satria iankinan-javatra maro.